Asa 5: 1-42
Asa 4 Asa 5 Asa 6
Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny Fanahy Masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany?
Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao hianao? Tsy nandainga tamin'olona hianao, fa tamin'Andriamanitra.
Ary hoy Petera taminy: Nahoana hianareo no niray tetika haka fanahy ny Fanahin'ny Tompo? Indro, eo am-baravarana ny tongotr'izay nandevina ny vadinao, ary hitondra anao hivoaka koa izy.
Ary ny tànan'ny Apostoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka; ary izy rehetra niray saina teo amin'ny Fialofan'i Solomona;
ka dia nentiny teny an-dalàmbe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana, mba hisy ho azon'ny tandindon'i Petera ahay, raha mandalo izy.
dia nisambotra ny Apostoly izy ka nanao azy tao an-trano-maizina.
Fa nisy anjelin'ny Tompo namoha ny varavaran'ny trano-maizina nony alina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe:
Ary rehefa nandre izany izy, dia niditra maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga ny mpisoronabe sy ny namany, dia nampiangona ny Synedriona sy ny loholona rehetra tamin'ny Zanak'Isiraely izy ka naniraka nankao amin'ny trano-maizina haka ny Apostoly.
Fa nony tonga ny mpiandry raharaha, dia tsy nahita azy tao an-trano-maizina; dia niverina izy ka nilaza hoe:
Ny trano-maizina dia hitanay mihidy tsara, ary ny mpiambina mitsangana eo am-baravarana; kanefa nony novohanay, dia tsy nahita olona tao izahay.
Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe: Ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano-maizina ireny, dia indreo izy mitsangana eo an-kianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona.
ka nanao hoe: Efa noraranay mafy dia mafy hianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany; kanjo, indro, efa nofenoinareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo hankinina aminay ny ran'izany Lehilahy izany.
Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy, Izay novonoin'ny tànanareo nahantonareo teo amin'ny hazo.
Izy nasandratry ny tànana ankavanan'Andriamanitra ho Tompo sy Mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Isiraely.
fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao, dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra hianareo.
Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Synedriona, sady faly, satria natao mendrika hitondra fahafaham-baraka ho voninahitr'izany anarana izany.
Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan-andro teo an-kianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy.